“Amma Shanee jechuun Oromoo jechuudha” jedheet Jawar Mohammed siyaasaa Bilxiginnaa harkatti galaafate. – Kichuu
HomeAfaan OromooNews“Amma Shanee jechuun Oromoo jechuudha” jedheet Jawar Mohammed siyaasaa Bilxiginnaa harkatti galaafate.
“Amma Shanee jechuun Oromoo jechuudha” jedheet Jawar Mohammed siyaasaa Bilxiginnaa harkatti galaafate. Jarri silaa gabaasa Amnastii Intarnaashinaal san sobsiisuuf jecha Shaneetu kana dalage jedhanii dokumantarii irratti hojjachuuf deemuuf yaada qabu. Waan isaan deemaniif osoo jarri hin dubbatin cululleen beekti. Dokumantarii Shaneetu fixe malee mootummaa miti jedhu yoo dhufe haarawa akka isinitti calulleen himee jira.
“Yeroo duraa Oromoon daangaa hanga daangaatti Abiyyi Ahmediin deeggaree ture” jedhu. Kun sobadha. Duras Warruma garuma qilleensi bubbisetti gugatutu isa deeggare malee Oromoo miti. Ammas as deebi’ee kan wacabbaru isaanuma. Oromoon dhugaa beeku; Qabsaa’onni kaayyoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo beekan durumaa hin deeggarre; deeggaruus hin danda’an. Warri ayyan-laallattoonni garuu ammallee sawarwara keessa jiru natti fakkaata. Fkn. Jara maqaa hayyummaa fi aktiivistummaan uummata afan-fajeessan keessaa jechoota namoonni lama dhiimma gabaasa “Amnesty International” baase irratti dubbatan nama dhiba. Jawaar Mohaammad OMN irratti akkas jedhe..” Mootummaan haaluu dhiisee dhiifama gaafatee yoo iitti fufe wayyaaf” . Ilaalaa Mootummaan kun si’a meeqa dhiifama nu gaafata? Nutimmoo si’a meeqa dhiifama goonee guyyaa gabrummaa keenyaa achi dheeressina? Har’as Dr. Henook Gabbisaa BBN irratti marii Afaan Amaaraan darbaa ture irratti, “ይህን ሪፓርት ሰምቶ መንግሥት እራሱን ማረም አለበት” jedhe.
Ilaalaa ammas jaruma kanatu akka Oromoon kutatee ka’ee qabsoo isaa itti hin fufne bishaan jala naqanii mootummaa kanaaf carraan biraa haa kennamuuf jechaa jiru. Dhiifama haa gaafatu malee; of haa sirreessu malee itti haa fufu jechaa jiru. Duras isaanuma kanatu Oromoo dogoggorse. Waa butachuu dhaqanii ta’uu dinnaan waan gara qabsootti deebi’an fakkaatan. Ammas garaan achuma jirti. Jara kana maaltu tuqe laata??
Ani akka dhuunfaattu gaafuma duraa EPRDF Abiyyi Ahmediin filateyyuu hin deeggarre. Deeggaruus hin danda’u ture. Sababni inni guddaan eenyuunuu haa ta’u OPDO deeggaruu hin danda’u. Attamiin? Inni lammataa Abiyyi Ahmed nama Itoophiyaa ishee uummata Oromoo ani keessaa dhaladhee jaarraa tokkoof walakkaaf gidirsite mataatti baatu deeggaruu hin danda’u. Ani sirriin ture. Duris hin deeggarre; ammas egeres hin deeggaru. Kanaafuu Oromoon duraan deeggaree ture inni jedhu “ faulty generalization “ dha
Via: Faajjii Dhugaa
This is what is happening in #Ethiopia during this pandemic crisis!!
Ajjeechaa Magaalaa Harar.
“Magaalaa Harar keessatti ajjeechaan qaama hin beekkamneen namaratti raawwatamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Haaluma kanaan Abdii Abrahim namni jedhamu gaafa saftii (Caamsaa 30, 2020) dabarte qaama eenyumaan isaa yeroof hin beekkamneen ajjeefame Hospitaala Hiwot Faana Naannoo Hararitti darbame argamee kan jiru yoo tahu,yeroo kanattis firaa fi maatiin isaa reefa qorachiisuuf Finfinnee erganiiti jiru.
Torbaan Lama keessatti Lubbuun nama Nagayaa Lama Bifa suukanneessan ajjeefamtee jirti.
Kana Hoo Bilxiginnaan Eenyutti achi qabdi amma??
Ajjeechan Bifa Kanaan Raawwatu Hidhata Siyaasaa If duuba Qaba. Dubbiin Tun Ammaaf akka salphatti laalamtus Boodden isii warra Angorra Jiru G.”atii isaan Kafalchiisun Waan Hin Oolledha
#Ethiopia: 4 gov’t officials killed by armed men in W. #Oromia while coming from field work of distributing seeds & fertilizer to internally displaced persons in #BenishangulGumuz region. Local authorities blame “Shene,” a reference to armed members of Oromo Liberation Army (OLA) https://t.co/Hd9ltVYmnC
— Addis Standard (@addisstandard) June 2, 2020
“Namnii Gaattii Gaariiti of Gurguruu Barbaaduu Nuu bira tuttureetu OPDO bira deemaa ”
Pr Mararaa Guddinaa Haayyuu Argaa Dhageettii oromoo Boruu waan ta’uuf Deemuu Nama dursee hubbaatu Hayyuu dhugaa